नेपाल आज | के हो माइग्रेन? यस्ता छन् यसबाट जोगिने उपाय
के हो माइग्रेन? यस्ता छन् यसबाट जोगिने उपाय
सोमबार, २७ फागुन २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । माइग्रेन एक टाउको दुख्ने समस्या हो । माइग्रेनबाट विश्वरका अधिकांश मानिस पीडित छन् । त्यसैले यसलाई साझा रोगको रुपमा लिइन्छ । जुनसुकै उमेरमा माइग्रेन हुनसक्छ । पुरुषको तुलनामा महिला बढी पीडित भएको पाइन्छ । सामान्यतया महिलामा भइरहने हर्मोनल परिवर्तनका कारण यस्तो भएको अनुमान गरिन्छ ।
माइग्रेन हुने खास कारण छैन । यद्यपी कसैमा अत्यधिक तनावका कारण माइग्रेन हुन सक्छ । घाममा धेरै समय विताएमा कसै कसैमा माइग्रेन भएको पाइन्छ । लामो समयसम्म भोकै बस्ने, राती काम गर्ने, तनावयुक्त काम गर्ने मानिसमा पनि माइग्रेनको समस्या वढी भएको पाइन्छ । यसका लक्षण व्यक्ति अनुसार फरक फरक हुन्छ । प्रायः टाउको एकातिर मात्रै बेसरी दुखिरहन्छ । कतिपयको दुबैतिर पनि दुख्ने गर्छ ।
वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, हातखुट्टा दुख्ने, घाममा बस्न नसक्ने, निन्द्रा नलाग्ने, चिड्चिडापन हुने लगायत माइग्रेनका लक्षण हुन् । माइग्रेनको उपचार गर्न खास उपचार पद्धति छैन । त्यसैले माइग्रेन बल्झिएमा चिकित्सकको निगरानीमा रहेर दुखाई कम गर्ने कडाखालका औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।शान्त ठाउँमा बस्ने, एक्सरसाईज गर्ने, जोखिमयुक्त काम नगर्ने गर्दा पनि माइग्रेनको समस्याबाट बच्न सकिन्छ । कतिपयमा आँखामा समस्या पिनास आदि कारणले पनि माइग्रेन हुने भएकाले यस्ता समस्याबाट बच्नुपर्छ । यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।